၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၉။ ရန်ကုန်။
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)-WLB ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၂၀ ပြည့်အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်နေ့ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ Inya Lake ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ WLB အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ အမျိုးသမီးအသင်းအဖွဲ့များ၊ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့်ဧည့်သည်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီခေါင်းဆောင်များနှင့် လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်များလည်း အခမ်းအနားတက်ရောက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
WLB တွင် တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးသမဂ္ဂပေါင်း ၁၃ ခု စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပြီး စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသမီးထုအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိကာ မိမိတို့ DPNS နှင့်လည်း မဟာမိတ်အဖြစ် လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၇- ၈- ၉။ ရွာငံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
စည်းလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်နှင့် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအား ရွာငံမြို့နယ်၊ ဗထူးခန်းမတွင် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှ ၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် စည်းလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်(UNA)၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူများ(မူကြမ်း)အား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြပ်အတည်း၏ ထွက်ပေါက်များ၊ အနာဂါတ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်စံထားသင့်သည့် စံနှုန်းများနှင့် State Building and Nation Building အကြောင်းများအား ပညာရှင်အသီးသီး က ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ဒေသခံပြည်သူ ၂၅၀ ခန့်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်လည်း အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်၍ DPNS ၏ အခြေခံနိုင်ငံရေးအယူအဆနှင့် တန်ဖိုးထားမှုများတွင်ပါဝင်သည့် ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာအမြင်များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။
ဓာတ်ပုံ- UNA page
အဆိုပါအမှုကို တရားရင်ဆိုင်ရန် နယ်သာလန်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် လာမည့် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက်နေ့များတွင် မြန်မာနိုင်ငံက သွားရောက်စစ်ဆေးခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအဖြစ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သွားရောက်စစ်ဆေးခံ၊ တရားရင်ဆိုင်မည်ဟုလည်း သိရပါသည်။ ထူးထူးခြားခြားဆိုသကဲ့သို့ နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ရမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်အတိုင်း သွားရောက်စစ်ဆေးခံ အမှုရင်ဆိုင်မည့်သူအား ချီးကျူး၊ ချီးမွမ်းမှုများလည်း ကြားနေရပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ စည်းကမ်းအရ အမှုကို လက်ခံရင်ဆိုင်သူသည် တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရလိမ့်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ရိုးရှင်းစွာပင် မိမိတို့နိုင်ငံ၊ မိမိတို့နိုင်ငံသားများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပုံရိပ်မှာ ကမ္ဘာ့အလယ်၌ အရှက်တကွဲ ကျဆင်းခဲ့ကြရပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စွပ်စွဲချက်၏ ရည်ညွှန်းကာလ၊ ရည်ညွှန်းဖြစ်ရပ်တို့မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည် ဒေသအနှံ့အပြား (အထူးသဖြင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသများတွင်) ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စိတ်မချမ်းမြေ့ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များအပေါ် အခြေခံပါသည်။ ထိုစဉ်က မိမိတို့ပါတီအနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဆောင်ရွက်မှုများရှိရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ရော နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပါ နားလည်မှုရှိရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းဘွယ်ရာဖြစ်နေခြင်း စသည့်အချက်များအား သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၆/၂၀၁၇ ဖြင့် ထောက်ပြခဲ့ပါသည်။
ထိုစဉ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကာလဖြစ်စေ၊ ယနေ့ ICJ တွင် တရားစွဲဆိုခံရသည့်ကာလဖြစ်စေ မိမိတို့ နိုင်ငံသားပြည်သူများမှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုများ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း – မဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ လူမျိုးစုံ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး အနေဖြင့် သိရှိစစ်ဆေးနိုင်လောက်သည့် တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များ ရနိုင်ခြင်းမရှိချေ။ သတင်းသမားများပင် ဖမ်းဆီး အပြစ်ပေးခံနေကြရသည့် အခြေအနေဖြစ်ရာ နိုင်ငံတကာအဝန်းအဝိုင်းနှင့် သတင်းမီဒီယာများ၏ ဖေါ်ပြချက်များမှာ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်တို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ကွဲလွဲကြောင်းမျှလောက်သာ သိရှိကြရသည့်အနေအထား ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွင် စွဲချက်တင်ခံရခြင်း ကိစ္စရပ်အတွက် အစ-အဆုံး သိရှိလျက် လက်တွေ့ကြပ်မတ် ညွှန်ကြားခဲ့သော အာဏာလက်ရှိအစိုးရနှင့် မြေပြင်တွင် လုံခြုံရေး၊ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတာဝန်များ တိုက်ရိုက် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဆင့်သည်သာ တာဝန်အရှိဆုံးဟု ထောက်ပြလိုပါသည်။ တာဝန်ရှိသည်အတိုင်း သွားရောက်စစ်ဆေးခံ အမှုရင်ဆိုင်ရခြင်းသည် ရှောင်လွှဲမရသည့် အဖြစ်အပျက်ဟုပင် သုံးသပ်မိပါသည်။ ထိုသို့
အမှုရင်ဆိုင်ကြရာ၌လည်း တရားလို-တရားပြိုင် ဟူသော ချဉ်းကပ်မှုမျိုးထက်၊ အမှန်တရားနှင့် လူမှုတရားမျှတမှုအတွက် နိုင်ငံချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုခြင်း အခြေခံဖြင့် ချဉ်းကပ်သင့်ကြောင်းကိုလည်း အကြံပြု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သို့မှသာ နားလည်မှုများစွာ ကွာလှမ်းခဲ့ရသည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရေးအနေအထားအား ပြန်လည် အဖတ်ဆည်နိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမျှမက မိမိတို့ တစုံတရာမျှ မသိရှိ၊ မကျူးလွန်ကြရပါဘဲ ကျွန်ဝယ်ရာ အဆစ်ပါလျက် ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ကျဆင်း နေကြရသည့် နိုင်ငံသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအားလည်း တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက ဝန်ချ၊ တောင်းပန်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အကြောင်း ထောက်ပြတိုက်တွန်းလိုပါသည်။
အဆုံးသတ်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိသဘောတူ ထောက်ခံ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆန့်ကျင်ရေး သဘောတူညီချက်များ စသည်တို့အပေါ် လေးစားလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်ဆိုသည့်အချက်ကို ယခုအမှုအား ရင်ဆိုင် လျှောက်လဲမည့် တာဝန်ရှိအစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် လေးလေးနက်နက် ဂရုပြုသင့်ပါကြောင်း အလေးအနက် တင်ပြနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
DPNS’ Political Views and Stand on recent news regarding Myanmar’s response to the lawsuit on Genocide [Political Commentary 9/ 2019]
“ Transparency and Accountability will save the Country’s Image and Dignity ”
DPNS has learnt that in early November, 2019 the Government of The Gambia broughtalawsuit against Myanmar regarding the violation of the genocide agreement at International Court of Justice. The Myanmar government has to defend this case at the International Court of Justice (ICJ) which is situated in Hague, the Netherlands.
Surprisingly, we have been witnessing people applauding for the decision of the Myanmar government to appoint the State Counselor as the representative to defend this case. However, Myanmar is obliged to and has the responsibility to facealawsuit brought to the International Court of Justice.
Basically, the dignity and image of our country and its citizens in the international community has fallen to the ground. This lawsuit against Myanmar is related to the sad events what have happened in Arakan state, particularly Maung Taw and Butheedaung regions in 2017. In September, 2017, DPNS had expressed its concerns for the necessity of transparency, of cooperation with local and international community for building understanding and trust. We have cautioned of the possibility of hurting the country’s image and its citizens’ dignity since the DPNS statement (September; 6/2017)
The people of Myanmar including ourselves have never had access to accurate information regarding with the situation in Northern Arakan state since 2017 until now. In this situation, even reporters who sought information were restricted from reporting and some detained. We were also aware that the information released in the international media differed significantly from the information released by the State and the Tatmadaw. It is therefore very difficult for us to assess whether these tragic events were genocide or not.
Therefore, we would like to stress that the most responsible persons and organizations are those who know the ground information. They are the government which gave the instructions and the Tatmadaw and its officers which followed the orders from above and carried out the security measures on the ground. Since they are responsible, it should be they that defend the lawsuit. It is the responsibility of the country. We would like to suggest that those who will defend the lawsuits, as the representatives of the country should cooperate with the international community for the cause of truth and justice rather than defending themselves. The country will also regain the trust of the international community.
We also would like to urge the responsible persons and institutions to apologize to their people who have lost their dignity and image in international community without their consent or without knowing anything regarding the sad events which has brought entire nation before the International Court of Justice.
In conclusion, we would like to remind the representative of the country who will defend the lawsuit that Myanmar is responsible for international treaties which it has signed including the Genocide Convention (1957); the Geneva Convention, and UN Human Rights charter.
Democratic Party foraNew Society (H.Q)
2019, December 1.
၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာ ၅။ အင်ဒိုနီးရှား။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Nasdam ပါတီက ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်းသို့ DPNS ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်အပါအဝင် SocDem Asia အဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
၎င်းသင်တန်းကျောင်းတွင် သင်တန်းအပတ်စဉ်တခုလျှင် သုံးလ ကြာမြင့်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်းရှိဒေသအသီးသီးမှ ပါတီကေဒါပေါင်း ၆၀၀ တက်ရောက်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။
၂၀၁၉၊ ၃- ၄- ၅ ဒီဇင်ဘာ။ ဂျကာတာမြို့၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ။
SocDem Asia က စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် လူမှုတရားမျှတရေးအတွက် အားလုံးပါဝင်သည့်မူဝါဒ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့အထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ NasDem ပါတီက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဒိန်းမတ၊် အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါနိုင်ငံတို့မှ SocDem Asia အဖွဲ့ဝင် ပါတီခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မှ ခေါင်းဆောင်များလည်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။